IGate.io Exchange Review 2021, kuphephile yini ukuthenga iBitcoin? - Cazoo
IGate.io Exchange Review 2021, kuphephile yini ukuthenga iBitcoin?
Ikhaya » Ikhaya » IGate.io Exchange Review 2021, kuphephile yini ukuthenga iBitcoin?
Tag: indawo engcono yokuthenga i-bitcoin, Thenga i-Bitcoin, isango.oi, kanjani ukuthenga bitcoin
Uma ungaqiniseki ukuthi ungayithenga kanjani i-Bitcoin, ungahle ungazi ukuthi yini i-Exchange.
I-cryptocurrency Exchange, eyi ibhizinisi lokho kuvumela amakhasimende ukuthi ahwebe ama-cryptocurrensets noma imali yedijithali ngokushintshana nezinye izimpahla. Impendulo yombuzo omkhulu "Uyithenga kanjani iBitcoin? " kulula: bheka esikhwameni sakho semali. Kukhona impahla yakho. Lokho kubizwa ngemali ye-fiat. Ungayithenga kuphi i-bitcoin?
Kade ngizama iGate.io muva nje, futhi ngifuna ukukhuluma nawe ngakho.
Lapha e-cazoo inhloso yami ukuyibamba ngekhanda, ngokuyibhala, ukuyibhloga uma uthanda, lonke ulwazi engiluqoqa nsuku zonke online. Ukuyibhala phansi, leyo yindlela yami yokufunda. Uma ngiyibhala, ngiyayikhumbula. Esikhundleni sokukwenza nje ngegama le-microsoft ngikwenza lapha, futhi mhlawumbe ngingasiza omunye umuntu ngamanothi ami. Ngizokhuluma nawe ngikhuluma ngedwa, sengathi yidayari.
Isinyathelo 1: Bhalisa i-akhawunti ku-Gate.io
Isinyathelo 2: Qinisekisa i-akhawunti yakho
Izimali Zokuhweba zeSpot And Margin
Imali ekhokhelwa idiphozi
Izimali Zokuhoxiswa Kwamasango
IGate.io yinkampani eyakhiwe ngeplatifomu yokushintshaniswa kwempahla ye-blockchain, eyenzelwe ukuhweba ama-cryptocurrensets. Plain futhi elula! Inganikeza ngemalimboleko ye-crypto-to-crypto, ukuhweba ngomkhawulo obekiwe kanye nedatha yemakethe entsha ye-crypto. Ukusobala kukhuluma ngokuvikeleka okunikezwe abasebenzisi bayo.
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule uGate.io ubungaze usuku lwabo lwesishiyagalombili, ngomhla ka-8 Ephreli nencwadi evulekile kusuka kuMsunguli uHan Lin.
Kutholakala eziQhingini zaseCayman, lokhu kungabhekwa njengokuthatheka, kepha bheka ikhasi labo le-LinkedIn, lokho ngabasebenzi ababucayi.
IGate.io iqhutshwa yiGate Technology Inc, inkampani ethi, ukucaphuna, "inikezelwe kwezokuphepha nolwazi lwakho, akunikezeli kuphela ukushintshana okuphephile, okulula ukuyisebenzisa kepha futhi ethembisa ukuvikela impahla yakho nolwazi." okuhlala kutshela okudingayo, lapho ukhetha ukushintshaniswa.
Angikwazi ukukutshela ngempela ukuthi lena indawo enhle kunazo zonke yokuthenga i-bitcoin kodwa impela ingenye yezindala kunazo zonke, eyasungulwa ngo-2013.
IGate.io isekela i-crypto ekuhwebeni nge-crypto, indawo kanye nokuhweba kwe-margin, kuphethe ikhodi yayo amakhulu ama-cryptocurrensets nezinye eziningi ezengeza inyanga ngayinye. Incubator yamaphrojekthi amahle, ungomunye wabadlali abakhulu laphaya.
Ngakho, uthenga kanjani i-bitcoin ku-Gate.io?
Khumbula njalo, futhi ngiqonde, njalo, ukunika amandla i- ukufakazela ubuqiniso be-factour ezimbili (2FA) nganoma yisiphi isiqinisekisi sokuqinisekisa okuthandayo / kwe-SMS, bese uqhubeka nokufaka i-crypto ku-akhawunti yakho.
Yebo, noma kunjalo, bhalisa ngaphambili: uma usebenzisa le khodi 3956874 noma chofoza lesi sixhumanisi: https://www.gate.io/signup/3956874.
Kungani? ☝️☝️☝️ Usebenzisa lesi sixhumanisi uzothola isephulelo esingu-20% kunoma iyiphi ikhomishini, kuze kube phakade!
Ngemuva kokubhalisa kukhona ukubhola okufanayo: uzothola okuzenzakalelayo akunampendulo mail kusuka ku-gate.io ukuqinisekisa ukuthi uyenzile i-akhawunti. Ukuchofoza kusixhumanisi sokuqinisekisa ku-imeyili yakho kuzokwenza kusebenze i-akhawunti yakho ngokuqedela inqubo yokubhalisa.
Kungani kufanele nginikeze omunye umazisi wami? KUMUNTU? Yebo, siyi-talinkg ngemali, futhi yenzelwa ukuphepha kwakho futhi, uma kungenzeka kuvuke impikiswano. Ngaphezu kwalokho, nge-akhawunti eqinisekisiwe ungafaka futhi ukhiphe izimali kalula. Futhi i-akhawunti yakho izovikeleka.
Ukuze uqedele inqubo yakho yokuqinisekisa ye-KYC, ngena ngemvume ku I-Gate.io Akhawunti, gcwalisa i-imeyili yakho ne-password. Khipha esikhwameni sakho i-ID ekhishwe uhulumeni (isb. Ipasipoti, ilayisense yokushayela noma ikhadi likamazisi).
Njengoba ungeke ukwazi ukuthenga i-bitcoin ngekhadi lesikweletu, ngekhadi lasebhange noma thenga i-bitcoin nge-paypal, imali enkulu inikezwa yithimba leGate.io.
Ukuhweba kwendawo kungu-0.2% kokuthengiselana ngakunye, kunciphisa lapho kukhuphula ivolumu yokuhweba.
Kumahhala ngokuphelele. NADA. NEIN. NIET. Nakhu ayikho imali yokuthengiselana lapho ufaka imali eGate.io.
Lapho umsebenzisi ekhipha impahla ye-cryptocurrency kokushintshisana, iqala imali ejwayelekile yenethiwekhi ye-blockchain futhi ilungiswa ngokuzenzakalela ngokuya ngezimakethe. Ukuthola umkhawulo wokuhoxa weGate.io, ungavakashela lokhu Page.
U-Y'all uthole amanye alawo ma-Dogecoins acwebezelayo futhi uhlela ukulinganisa isikhwama sakho semali futhi Thenga i-bitcoin nalokho? Qonda ngakwaGate.io, futhi yenza i-akhawunti. Uma usebenzisa le khodi 3956874 uzothola ukuncishiswa okungama-20% kwawo wonke amakhomishini ngokuhweba kwakho, kuze kube phakade.
Qaphela. Ukuhweba kuyingozi. I-Crypto yilezi I-volatile. Ungafaki engozini izimpahla zakho uma ungakakulungeli.